स्कुल बसमा गीत बजाउने कि नबजाउने? | नुवागी
स्कुल बसमा गीत बजाउने कि नबजाउने?
आजभोलि अधिकांश विद्यालयले स्कुल बस सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। विद्यार्थी ल्याउन र पुर्याउन सजिलो हुने भन्दै सञ्चालित त्यस्ता कतिपय बसबाट कहिलेकाहीँ आफ्नै विद्यार्थीको ज्यान समेत लिएका उदाहरणहरू छन्। दुर्घटनाका विविध कारण छन्। बस भित्र बजाइने गीतले पनि दुर्घटनाहरू गराएका उदाहरण हाम्रै शहरमा छन्। तसर्थ स्कुल बसभित्र गीत बजाउने वा नबजाउने भन्नेबारे सम्बन्धित विद्यालयका सञ्चालक र ती बसमा आफ्ना नानीहरू राखेर पठाउने अभिभावकले सोच्नु पर्ने देखिन्छ।
रोहन श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) बिहान साढे आठ बजे आफ्नो घरबाट निस्केर स्कुल बस चढ्छन्, स्कुल बस चढ्ने बित्तिकै अहिले उनलाई आनन्द लाग्छ।
एक महिना अघिसम्म उनलाई स्कुल बस चढेपछि कहिले स्कुल आउला भन्ने आतुरी हुन्थ्यो।
त्यसको कारण थियो बसमा ठूलो आवाजमा बज्ने हिन्दी र नेपाली भाषाका गीतहरू।
‘स्कुल बसमा गीत बज्दा चालकले आफूलाई मनपर्ने गीत मात्र बजाउँथे। हाम्रो इच्छाको गीत नै बज्दैनथ्यो।’
उनले भने, ‘अरु बेलामा गीत बज्दा झ्याउ लाग्थ्यो भने परीक्षा दिन जाने बेलामा पनि गीत बज्दा चाहिँ एकदम दिक्क लाग्थ्यो । कहिलेकाहीँ त रिस उठ्थ्यो।’
अहिले भने उनको स्कुल बसमा गीत पनि बज्दैन ।
त्यस्तै भक्तपुरकै प्रोक्सीमा इन्टरनेशनल स्कुलमा नंखेल, सिपाडोलका विद्यार्थीहरू १ घण्टाको यात्रा गरेर स्कुल आउँछन्।
स्कुलका निर्देशक धर्मरत्न खाइतु स्कुल बसमा कहिलेकाही अँग्रेजी, हिन्दी, नेपाली गीतहरू बज्ने बताउँदै भन्छन्, ‘बसमा गीत बजाउँदा बच्चाहरू गीतमा केन्द्रित भई यात्रालाई सहज मान्छन्।’
स्कुलकै किसिमका गीत, राष्ट्रिय गान बजाउन बस चालकलाई सुझाव दिएको उनले जानकारी दिए।
जोरपाटी स्कुलका प्रधानाध्यापक भने सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक अवस्था कम भएका कारण पनि स्कुल बस राख्नु विद्यालयका लागि सजाय हुने बताउँछन्। सामुदायिक विद्यालयमा गाडी राख्ने भन्दा गाडी नहुनेहरूको बहुमत रहेको र आफ्नो स्कुलमा गाडीको माग नआएको जानका दिए।
स्कुल बसमा गीत बज्ने, नबज्ने थाहा नहुने
केही स्कुलका प्रिन्सिपललाई आफ्नै स्कुल बसमा कस्ता गीत बज्छन् भन्ने जानकारी छैन।
भक्तपुरको सुडालस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल इन्द्रमणि गिरी भन्छन्, ‘स्कुल बसमा गीत नै नबजाउनु राम्रो हो । किनभने बच्चाहरू कहिले चढ्ने र झर्ने क्रममा गीत बज्दा चालकको ध्यान पनि गीतमा जाने भएकाले चालकले कसैले केही भनेको सुन्दैनन् ।’
उनको स्कुलले पनि एउटा गाडी भाडामा लिएर चलाइरहेको छ । १५ मिनेटको बाटो तय गरेर विद्यार्थी आउने बाटोमा कहिले काही गाडी चालकले गीत बजाउन सक्ने उनको अनुमान छ ।
स्कुल बसमा गीत नबजाउन भन्दै उनी गीत बजाउनै परे पढाईसँग सम्बन्धित गीत बजाउन सुझाव दिन्छन् ।
भाडाका गाडी राख्दा समस्या
काठमाडौंको मनोहरास्थित श्रीयन्त्र एजुकेशन फाउण्डेशन स्कुलको एउटा स्कुल र अर्को भाडाको गरि दुईवटा स्कुल बस छ ।
भक्तपुर र काठमाडौं दुवै जिल्लाका विद्यार्थी १ घण्टासम्मको बस यात्रा गरेर स्कुल आउँछन् ।
प्रिन्सिपल अरुण पौडेल स्कुल बसभित्र हिन्दी गीत नबजाउन चालकलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् ।
आफ्नै स्कुल बसमा नेपालीबाहेक अरु गीत नबज्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, ‘भाडाको बस भएकाले त्यो बसमा बज्ने सम्भावना हुन्छ । तर हामीले त्यसमा पनि हाम्रा स्टाफ राखेका छौँ । टुर वा घुम्न जाँदा भने बजाउन दिन्छौँ ।’
भाडाका गाडीले हतार गरेर कुदाउने, रोक्न पर्ने ठाउँमा भन्दा धेरै टाढा रोक्ने र अरुले हर्न बजाएको पनि नसुन्ने गरी गीत बजाउने खालका चालकहरू हुने हुँदा चालकको व्यवहारलाई हेरेर मात्र स्कुल बसको लागि राखिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
भाडाका चालकले बढी गतिमा बस कुदाउने थाहा पाएपछि २ वटा त्यस्तो बसलाई परिवर्तन गरेको उनले बताए।
देशप्रेमका गीतले विद्यार्थीलाई प्रेरित गर्ने उनको विश्वास छ।
स्कुलले ठूलो आवाजमा गीत बजाउन बन्देज गर्दै उफर पनि नराखेको प्रअ पौडेल बताउँछन्।
बसमा ठूलो आवाजले गीत बजाउँदा अगाडीबाट आएको पनि सुनिँदैन र पछाडिबाट आएको सवारी साधन पनि थाहा नपाई त्यसले दुर्घटना गर्ने उनको भनाई छ।
गीत बजाउन परेमा होसियारीपूर्वक छानिएका गीत सानो आवाजमा बजाउन उनले सुझाव दिएका छन्।
स्कुल बसमा गीत भन्दा समाचार बजाउनु राम्रो
ललितपुरको हरिसिद्धिस्थित ब्राइट स्टार वर्कस सेकेण्डरी स्कुलका प्रिन्सिपल श्यामकुमार यादव आफ्नो स्कुल बसमा गीत नबज्ने बताउँदै भन्छन्, ‘स्कुल बसमा गीत बजाउँदा चालकको ध्यान अन्तैतिर हुन्छ र दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ।’
गीतको साटो सूचना, जानकारीका कुरालाई बसमा बजाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विद्यार्थीको समयको सदुप्रयोग गर्दै स्कुल बसबाटै देश र विदेशका कुराहरू सुनाएर सूचना सुन्ने बानीको विकास गर्न सकिने उनले बताए।
‘संस्कृति, इतिहास, भुगोलसम्बन्धि ज्ञान दिने गीतहरू भए बजाउन सकिन्छ तर हामीले समाचार सुन्न लगाइदिएमा हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री यो भन्ने मात्र सुने भने पनि विद्यार्थीले केही ज्ञान पाउँछन्।’
उनी तुलनात्मक रूपमा बसमा गीत भन्दा समाचार बजाइदिनु राम्रो भन्दै भन्छन्, ‘गीतले सूचनाभन्दा पनि मनोरञ्जन दिन्छ, समाचारले सूचना दिने हुँदा त्योसँगै हामी रम्नु पर्दैन र गीतमा जसरी मन डुबेर त्यसैतालमा मन नाच्ने, कल्पनामा डुब्ने जस्ता कार्य समाचारले गर्दैन र समाचार बजाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना पनि कम हुन्छ।’
स्कुल बसमा गीत बज्नु दुर्घटनाको कारण
स्कुल बस दुर्घटनाका विविध कारणहरू छन्। स्कुल बसमा गीत बजाउनु तीमध्ये एक मानिएको छ।
कतिपय स्कुलका प्रिन्सिपल र अभिभावकहरूले पनि गाडी कहाँ पुग्यो? कति बेला आइपुग्छ भनेर सोध्न पनि प्राय जसो गाडीका चालकलाई नै सम्पर्क गर्ने गर्छन्।
त्यसो हुँदा कतिपय चालकहरूले हेडफोन कानमा लगाइरहेका हुन्छन्। त्यसले पनि कसैले बोलाएको वा अन्य आवाज नसुन्ने सम्भावना हुन्छ।
यस्तै कारणले आफ्नो बसबाट ओर्लिएर घर जान लागेका विद्यार्थीलाई आफ्नै गाडीले किचेर ज्यान गएका घट्नाहरू पनि छन्।
विद्यार्थीलाई सहज बनाउनका लागि स्कुल बस राखेर मात्र हुँदैन। विद्यालयले स्कुल बसभित्रका क्रियाकलापलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
विद्यालयको वेवास्ताले ठूला– ठूला दुर्घटना निम्तिन सक्छ।
कुनै पनि दुर्घटना भइसकेपछि भन्दा पनि त्यसलाई रोक्न सुरुमै स्कुलले ध्यान दिनुपर्छ।
स्कुल बसभित्र धेरै क्रियाकलाप हुन्छन्।
स्कुल बस पनि स्कुलको एउटा कक्षा कोठा नै हो भन्ने आत्मसात गरी विद्यालयले त्यहाँका क्रियाकलापलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।
सूर्यविनायक नगरपालिकाले भन्यो : ‘पहिला गीत गाउन लगाऊ, त्यसपछि मात्र पढाऊ !’
काम नलाग्ने सामानलाई उपयोगी बनाए विद्यार्थीले